၂၀၁၈ မြန်မာ့ စိုက်ပျိုးရေး ကုန်စည်ပြပွဲ
Agri Myanmar 2020 မှ ထွးစွာ ကြိုဆိုပါ၏ !
Agri Myanmar 2020 ပြပွဲ - ယဘုယျ သတင်းအချက်အလက်
နံနက် ၉း၀၀ နာရီ မှ ညနေ ၅း၀၀ နာရီ အထိ (နေ့စဉ်)
ရို့စ်ဂါးဒင်း ဟိုတယ်၊ ရန်ကုန်၊ မန်မာ။
Agri Myanmar 2020 က ဘာတွေ မျှာ်လင့်ထားသလဲ ?
မြန်မာနိုင်ငံရှိ စိုက်ပျိုးရေး စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများ အတွက် အကြီးမားဆုံး င်ငံတကာ ကုန်စည်ပြပွဲ
ကုန်ပစ္စည်း ထာက်ပံ့သူ င့် ဖန့်ဖြူးသူ အကြား စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဆက်သွယ်မှု
ဆေးရုံ/ဆေးဝါးဈေးကွက်/ဓါတ်ခွဲခန်း များသို့ အလည်အပတ်သွားခြင်း
နည်းပညာအသစ်များ၊ သတင်းအချက်အလက် ဖလှယ်ခြင်း၊ ထုတ်ကုန်အသစ်များ မိတ်ဆက်ခြင်း
ဘာကြောင့် မန်မာနိုင်ငံသည် အလားအလာကောင်းသော ဈးကွက် ဖစ်ရတာလဲ ?
မြန်မာနိုင်ငံသည် အခြေခံ အဆောက်အဦးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခြင်း နှင့် ဒီမိုကရေစီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လားခြင်း တို့ကြောင့် အကျိုးအမြတ်ရှိသော ဈေးကွက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ လူဦးရေ သန်း(၆၀)ကျော်၊ ကျယ်ပြန့်သော မြေပထ၀ီ အနေအထား နှင့် တန်ဖိုးနည်း သယံဇာတများ နှင့်အတူ အာရှ၏ “နောက်ဆုံးနယ်စပ်” အဖြစ် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံလိုသူများကို ဆွဲဆောင်နေပါသည်။
ဘဏ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍ၏ အနာဂတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန် မျှော်လင့်ပြီး မြန်မာ နိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်မှ ဥပဒေအသစ် ပြဌာန်းပြီး ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဂျူလိုင်လတွင် လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ထူးခြားသော မြေဆီမြေသြဇာများ နှင့် ရေအရင်းအမြစ် အလျှံပယ် ပေါကြွယ်ဝခြင်းက အရှေ့တောင်အာရှတွင် ဒဏ္ဍရီသဖွယ် တွင်ရစ်လောက်အောင် ထင်ရှား ကျော်ကြားသည်။ ထိုအရာက အာရှအားလုံးတွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် နှစ်သက်စရာအကောင်းဆုံး စိုက်ပျိုးရေးအခြေအနေ ရှိသည်ကိုလည်း ပြောပြနေပါသည်။ အသီးအနှံ မှစ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ ဆန်မှစ ပဲအမျိုးမျိုး အားလုံးနီးပါးကို တိုင်းပြည် အတွင်း စိုက်ပျိုးနိုင်သည်။ စိုက်ပျိုးရေး ကဏ္ဍသည် လုပ်သားအင်အား၏ ၆၀% ကျော် အလုပ်သမား နှင့် GDP ၃၈% ပံ့ပိုးမှုဖြင့် စီးပွားရေးကို စိုးမိုးထားပါသည်။ စီးပွားရေးအတွက် စိုက်ပျိုးရေး၏ အရေးပါမှု နှင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ အသွင်ကူးပြောင်းမှု၏ ရလဒ်အဖြစ် လာမည့်နှစ်တွေမှာ အလုပ်ရှင် လျော့ပါး လာပါလိမ့်မည်။ သို့သော်လည်း စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍသည် နှစ်ပေါင်းများစွာထဲက ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆင်းရဲမွဲတေမှု လျှော့ချရေးအတွက် ထူးခြားတဲ့ အခန်းကဏ္ဍမှ ဆက်လက်ပါဝင်နေမှာ ဖြစ်ပါသည်။
ဘာကြောင့် ပါဝင်ပြသသင့်သလဲ ?
စီးပွားရေး အခွင့်အလမ်းများ ပိုပြီးရှာဖွေ နိုင်ရန်
၀ယ်လက်များ၊ ဖြန့်ဖြူးသူများ ကို တိုက်ရိုက်တွေ့ဆုံရန်
စိုက်ပျိုးရေးသူတေသီများ၊ လယ်သမားများ ကို တိုက်ရိုက် တွေ့ဆုံရန်
ဘာကြောင့် သွားရောက်လည်ပတ် သင့်သလဲ ?
နောက်ဆုံးပေါ် ကုန်ပစ္စည်းများ နှင့် နည်းပညာ အရင်းမြစ်များ ရှာဖွေရန်
သြဇာအာဏာရှိသော စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်များနှင့် တွေ့ဆုံရန်
သင်အလည် မလာခင် ပြပွဲပြသသူများ နှင့်အတူ တွေ့ဆုံရန် အချိန်ဇယား အရင်ပြုလုပ်သင့်သည်
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ နှင့် ပြည်တွင်း ဈေးကွက်ကို ပုံဖော်နေသော နောက်ဆုံးပေါ် ခေတ်ရေစီးကြောင်း နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အပေါ် အာရုံစိုက်ထားသော ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဟောပြောပွဲ အစီအစဉ်များ
အစိုးရ နှင့် ၀န်ကြီးဌာနများ၏ ထောက်ခံမှု လက်အောက်တွင် Minh Vi Co., Ltd. (VEAS) သည် ဒေသတွင်း နောက်ဆုံး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဈေးကွက်ထဲမှာ စီးပွားရေး ချိတ်ဆက်ဖန်တီးရန် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဦးဆောင် ကုမ္ပဏီများတွင် နံပါတ်(၁) ပလက်ဖောင်းအဖြစ် ဂုဏ်ယူပါသည်။ သင် ယခုစတင် ရယူခြင်းဖြင့် ပထမဆုံး အသီးအပွင့်များကို ပျော်ရွှင်စွာ ခံစားလိုက်ပါ!
က်ပျိုးရေး ဓာတုဆေး နှင့် သီးနှံ ပိုးမွှားကာကွယ်ရေး ထုတ်ကုန်များ
စိုက်ပျိုးရေး ဓာတုဆေးများ - ဓာတုပိုးသတ်ဆေး နှင့် Intermediates (ပိုးသတ်ဆေး၊ ဘက်တီးရီးယား ကာကွယ်ဆေး၊ ပေါင်းသတ်ဆေး ၊….) ၊ ဇီဝပိုးသတ်ဆေး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပိုးသတ်ဆေး၊ စိုက်ပျိုးရေး ဓာတု ထုတ်လုပ်ခြင်း နှင့် ထုတ်လုပ်မှု နည်းပညာများ
ဓာတုဓါတ်မြေသြဇာများ - နိုက်ထရိုဂျင် ဓါတ်မြေသြဇာ၊ ပိုတက်ရှ် ဓါတ်မြေသြဇာ၊ ဖော့စဖိတ် ဓါတ်မြေသြဇာ၊ ကွန်ပေါင်း ဓါတ်မြေသြဇာ၊ အထူး ဓါတ်မြေသြဇာ အသစ်များ ( ပင်လယ်ရေညှိ ဓါတ်မြေသြဇာ၊ ဇီဝမြေသြဇာ၊ သစ်ရွက် ဓါတ်မြေသြဇာ၊ တဖြေးဖြေး ပျော်ဝင် ဓါတ်မြေသြဇာ၊ Trace Element မြေသြဇာ၊ Humid အက်ဆစ် မြေသြဇာ…..)
သီးနှံကာကွယ် စောင့်ရှောက်မှု နှင့် ဇီဝ နည်းပညာ - အပင်ပုံမှန် ကြီးထွားမှု၊ Transgenic ထုတ်ကုန်များ၊ မြေဆီလွှာ အားဖြည့် ပစ္စည်းများ၊ အာဟာရဖြည့် ပစ္စည်းများ၊ မြက်ခင်းပြင်
စိုက်ပျိုးရေး စက်မှု ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
မြေသြဇာ ကောင်းဖို့အတွက် အသုံးပြုသော ဆက်စပ် စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ
စိုက်ပျိုးရေးဆေး ထုတ်ကုန် ထုတ်လုပ်သော ပစ္စည်းကိရိယာများ
လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး နှင့် အခြား ထုတ်ကုန် ထုတ်လုပ်ခြင်း
အီလက်ထရောနစ်/တိကျသော လယ်ယာစိုက်ပျိုးခြင်း/စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ ဆော့ဖ်ဝဲများ
သိုလှောင်မှု နှင့် ရိပ်သိမ်းထုတ်ကုန်များ မပျက်စီးအောင် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်း
စိုက်ပျိုးရေးသုံး ပလက်စတစ် ထုတ်ကုန်များ
ပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး ပစ္စည်းကိရိယာများ
စွန့်ပစ်ရေ နှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စွန့်ပစ်မှု နည်းပညာများ နှင့် ပစ္စည်းကိရိယာများ
ဆန်၊အစေ့၊ သစ်ခွ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊…..
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် လယ်ယာသမားများ နှင့် လယ်ယာ ပိုင်ရှင်များ
စိုက်ပျိုးရေး ပညာရှင်များ နှင့် စိုက်ပျိုးရေး သုတေသီများ
တင်သွင်းသူများ/တင်ပို့သူများ/အေးဂျင့်များ နှင့် ဖြန့်ဖြူးသူများ
စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်များ ကုန်သည်များ/လက္ကားရောင်းချသူများ
စိုက်ပျိုးရေးနှင့် သက်ဆိုင်သော အသင်းအဖွဲ့ဝင်များ
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ နှင့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ
အင်ဂျင်နီယာများ နှင့် နည်းပညာရှင်များ
သုတေသီများ နှင့် စီမံကိန်း မန်နေဂျာများ
အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်များ၊ သုတေသနဌာနမှ နည်းပညာရှင်များ
ဧည့်သည် စာရင်းရေးသွင်းခြင်း ဖောင်